10 sanno ka hor maanta oo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf ayaa is casilay – Radio
December 29, 2018	62	Like
Toban sanno ayaa laga jooga markii maanta oo kale madaxweynihii dowladda kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, Cabdullaahi Yuusuf Axmed is-casilaaddiisa ka horjeediyay Baarlamaanka oo xilligaas fadhigiisa ahaa Baydhabo.
Waxaa uu marka sabab uga dhigay is-casilaaddiisa dhowr qodob oo kala ah in Axdiga u degsan dowladda oo la baal-maray, isla markaana la sameeyay waxyaabo aan sharci ahayn, in dowladda ay taageerro ka weysay beesha caalamka, In Xoogagga ka soo horjeeda dowladda ay inta badan dalka soo qabsanayaan, iyadoo aaney jirin awood ay dowadda wax uga qaban karto iyo qodobbo kale.
Cabdullaahi Yuusuf, ayaa warqada uu isku casilay ku wareejiyay xilligaa Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) oo ahaa guddoomiyaha Baarlamaankii dowladda kumeelgaarka ahayd,iyadoo Hiiraan Online ay ka mid ahayd warbaahinta ugu horreysay ee si dhaqso leh usoo tabisay is casiladda madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf 29kii bishii December ee sannadkii 2008 oo maanta laga joogo toban sanno.
Bishii October ee sannadkii 2004tii ayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya loo doortay Cabdullaahi Yuusuf oo bishii Maarso ee sannadkii 2012 ku geeryooday isbitaal ku yaalla magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta.
Waxa lagu xasuusto waxaa ka mid ahinuu la dagaallamay maxkamadihii Islaamiga, la dagaallankii al-Itixaadkii Soomaaliya , inuu ahaa Madaxweynihii u horreeyay ee Villa Somalia fariista, kaddib tobanaan sanno oo ka soo wareegatay burburkii dowladdii milateriga aheyd ee uu hoggaaminayay Marxuum Maxamed Siyaad Barre iyo inuu dhisay maamul gobolleedka Puntland.
Allaha u naxariistee Cabdullaahi Yusuf Axmed wuxuu ku dhashay tuulo ku dhow magaalada Garoowe sannadkii 1934-tii sida uu ku qoray buuggiisa Halgan iyo haragrdaamo.
Cabdullahi Yusuf waxa uu dowladdii Maxamed Siyaad Barre u xirnaa wakhtiyadii u dhaxeeyey dabayaaqadii 1969-kii ilaa bartamihii 1975-tii.
Markii la soo daayeyna Cabdullahi Yusuf waxa uu u shaqeeyey dowladdii Maxamed Siyaad Barre, ka dibna waxa uu ka mid ahaa hoggaamiyaashii miletri ee dowladdii Siyaad Barre u dirtey dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmarey sannadkii 1977kii.
Bishii September ee 1978dii waxa uu ka mid ahaa dad mucaarid ku noqdey dowladdii Siyaad Barre oo dhisey Jabhadii la magacbaxdey SSDF, taas oo uu Cabdullahi Yusuf madax u ahaa dhowr sanno, ka hor intii aan Itoobiya lagu xirin.Mar kale ayuu Cabdullaahi Yuusuf madex u noqdey SSDF intuu u dhaxeysey 1991 – 1997.
Wuxuuna ciidanka Soomaalida ka gaaray darajada Gashaanle Sare. Waxay rafiiq ahaayeen Jen. Caydiid oo isku gobolna ahaayeen, isla xirnaan jireen, dagaalkii Itoobiya ay ka wada qayb galeen isla markaana heshiis meelmar noqday ay ka gaareen colaad Gaalkacyo ka taagnayd horraantii 90-maadkii.
Sannadkii 1998 ayaa Cabdullahi Yusuf Axmed loo doortey inuu noqdo madaxweynaha dowlad-gobolleedka Puntland ee Soomaaliya.
Request for Construction of 1 Elevated Tank for Community Borehole Introduction As part of Hunger ...